एनआईसी एशिया बैंकले २१ लाख सम्मको बीमा गराउने « Artha Path
एनआईसी एशिया बैंकले २१ लाख सम्मको बीमा गराउने
काठमाडौं । “बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि” भन्ने मूल नाराका साथ जनमैत्री बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको एन आई सी एशिया बैंकले न्यू सुपर चमत्कारिक मुद्धती निक्षेप योजनामा उच्च ब्याजको साथै २१ लाख रुपैयाँसम्मको अतुलनीय बीमा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
यो मुद्धती खातामा ग्राहकहरुले उच्च ब्याजदर सँगै ३ विभिन्न बीमा सुविधा पनि पाउने छन । २१ लाख रुपैयाँसम्मको ३ चमत्कारिक बीमा सुविधा पाउने छन । यो बीमा सुविधाअन्तर्गत खातावालाको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा वा पूर्ण रुपमा अशक्त भएमा रु १० लाखसम्मको बीमा सुविधा उपलब्ध छ । यस्तै, १८ घातक रोगहरुको लागि रु १० लाखसम्म र १ लाखसम्मको औषधी उपचार बीमा सुविधा समेत उपलब्ध छ ।
यसैगरी औषधी उपचार बीमा अन्तर्गत बैंकले आफ्ना ग्राहक महानुभावहरुलाई अझ विशेष सुविधा दिने उद्देश्यले बहिरंग (ओपिडी) उपचारमा रु. २० हजारसम्म र अस्पताल भर्ना वापत रु. ८० हजार सम्मको बीमा सुविधा प्रदान गर्नेछ ।
एन आई सी एशिया बैंकमा मुद्धती खाता खोलेकै भरमा पाइने यस्तो सुविधा देशकै सर्वोत्कृष्ट मुद्धती योजना रहेकोले आफ्ना ग्राहकवर्गहरुको लागि एकदमै फाइदा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले ल्याएको विभिन्न निक्षेप योजनामा हालसम्म १ सय २ जना ग्राहकले यो सुविधाबाट रु ६० लाख भन्दा बढीको बीमा रकम प्राप्त गरीसकेको बैंकले दावी गरेको छ ।
आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले बोलायो स्थगित साधारण सभा
काठमाडौँ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले साधारण सभा बोलाएको छ । रिइन्स्योरेन्सले यसअघि स्थगित गरेको वार्षिक साधारण